የሀዘን መግለጫ Ibsa Gaddaa fi Waamicha Biyyaalessaa – We can Ethiopia
by zesk.ender@gmail.com October 13, 2020 0 comment
Waxabajjii 23 bra 2012
Nuti dhaabbileen maqaan keenya armaan gaditti tarreeffame,
Oduu ajjeechaa Artiistii jaalatamaa fi dargaggeessa lammii keenya Hacaaluu Hundeessaa irratti , kaleessaa Waxabajjii 22 bara 2012 ALI tti raawwatame, kan dhageenye haala gaddaa fi dallansuu cimaadhaani. Haadha manaa Haacaaluutiif, ilmaan isaaf, maatiifii ummata Itoophiyaatiif gadda nutti dhagahame ibsuu barbaadna.
Gochi yakka ajjeechaa kun kan inni raawwatame qormaatiileen u’ulfaatoon, yeroo biyya keenya muudatanii fi yeroo kamiiyyuu caalaa tokkummaan yeroo nu barbaachisu keessaatti tahuun isaa, gochi yakkaa kun lammii keenya Artiistii jaalatamaa Haacaaluu qofa irratti kan raawwatame osoo hin ta’in , akka gochaa fi yakka aggaammii tokkummaa biyya keenyaa, nageenyaa fi gamtaawina hawaasa keenyaa irratti raawatametti lakkoofna.
Waan ta’eefis :
Mootummaan qaamota gocha yakkaa kana raawwatanii fi kan duuba taa’anii qindeessan osoo yeroo hin balleessinii fi diinotni keenya kan dhihoo fi fagoo akka hawwanitti biyyi keenya rakkoo biraatiif osoo hin saaxilamin , seeraan gaafatmoo akka tahan akka godhu;
Mootummaan Federaalaa sababaa gocha yakkaa kanaatiin wal qabsiisuun hawaasa keenya wal nyaachisuuf ta’e jedhamee kakaasii miiraan raawwatamuun , lubbuu namaa fi qabeenya irratti miidhaan osoo hin qaqqabin , barbaachisaa taanaan , Labsii Yeroo Ariifachiisaa sababaa dhibee Kooviid-19 (COVID-19 )tiin labsame cimsuudhaan itti gaafatama seeraa fi sirna kabachiisuu ofirraa qabu akka bahatuu fi biyyaa fi ummata akka tasgabbeessu;
Yeroo rakkoo hammaataa akkanaa tokkummaan keenya akkaan barbaachisaa waan ta’eef , Dhaabbilee Siyaasaa dabalatee lammiileen hundi mootummaa cinaa dhaabbachuudhaan itti gaafatama keenya gamataadhaan akka baanu kabajaadhaan yaadachiifana.
Gocha gaddisiisaa ta’e kana akka carraa gaariitti lakkaa’uun, biyya keenya jeequmsa keessa galchuudhaaf qaamotni badii yaadan gochaa badii isaanii irraa akka of qusatan akeekkachiisna; hawwiin isaanii akka hin milkoofnee fi tokkummaa keenya daran kan cimsinu ta’uu akka hubatan cimsinee yaadachiifna.
Itoophiyaan Tokkummaa Ishitiin Cimtee Bara Baraan Haa Jiraattu!
Dhaabbileen Ibsa Kana Mallatteessan :
Ethiopian Community Association in Greater Cincinati
Ethiopian Community Association in Central Indiana
Ethiopian Community Association in the Milwaukee Area
Ethiopians in Nashville